Kugqame imbokodo kwezemidlalo ngo-2021
UTATJANA Schoemaker nendondo yegolide ayithole ku-200m Backstroke kuma-Olympics Isithombe: EPA
UNYAKA ka-2021 ubeyimpumelelo kwabesifazane abakwezemidlalo kuleli kanti negalelo lamaqembu abesimame liqhakambise ngefulegi laseNingizimu Afrika, emidlalweni ehlukene.
Iqembu lekhilikithi labesifazane libuyengomfutho yize laphazamiseka ngo-2020 ngoba lagcina ukudlala ngoMashi kowandulela owamanqamu kwiNdebe yoMhlaba ye-T20. Nokho, iqembu likaHilton Moereeng lenze ezibukwayo, liqopha nomlando kulo nyaka.
AmaProtea aqede unyaka engahlulwanga ngemuva kokubhekana nePakistan, i-India neWest Indies. Bashaye iPakistan ngo 3-0 emidlalweni yosuku olulodwa ngoJanuwari, ngaphambi kokunqoba uchungechunge lweT20 ngo 2-1. Yonke imidlalo yadlalelwa eThekwini.
NgoMashi balibangise e-India, baqopha umlando ngokunqoba imidlalo yosuku olulodwa ngo 4-1, bethatha uchungechunge lweT20 ngo 2-1. NgoSepthemba balibhekise eWest Indies, badlala ngokulingana ngo 1-1 kwiT20 banqoba imidlalo yosuku olulodwa ngo 4-1.
Indlela iqembu elidlale ngayo izomjabulisa umqeqeshi walo, uMoereeng njengoba lisaqhubeka namalungiselelo eNdebe yoMhlaba ezoba ngoMashi, 2022 nezodlalelwa eNew Zealand.
Ebholeni labesifazane, nakuba iBanyana Banyana yehlulekile ukunqoba iCosafa Women’s Championship, okwesihlanu kulandelana kodwa iphumelele kwezinye izindawo iqembu lesizwe.
Linqobe i-Aisha Buhari Cup eNigeria ngoSepthemba, lihlula iGhana neNigeria. Iqembu likaDesiree Ellis lisasethubeni lokungena kwi-Africa Women’s Cup of Nations ka-2022, ngemuva kokubhaxabula iMozambique ngo 13-0 emilenzeni emibili esigabeni sokuqala sokuyihlungela ngo-Okthoba.
I-Mamelodi Sundowns Ladies yenze kahle kakhulu kuleli uma kukhulunywa ngebhola likanobhutshuzwayo ngo-2021. Ayigcinanga ngokuvikela isicoco seHollywoodbets Super League kodwa iphinde yamela iNingizimu Afrika, ngokunqoba umqhudelwano weCosafa owawusetshenziswa ukuhlungela iCaf Women Champions League, yabe isithatha nesicoco seChampions League.
ABADLALI beMamelodi Sundowns Ladies ngemuva kokuba ngompetha bokuqala beCaf Women Champions League Isithombe: MAMELODI SUNDOWNS
AmaSandawana adla iHasaacas Ladies yaseGhana ngo 2-0 kowamanqamu owawuseCairo ngoNovemba, eqeda lo mqhudelwano ngaphandle kokungenelwa yigoli emidlalweni emihlanu.
Iqembu lesizwe lenetball likhombisile ukuthi ucilo akazishayanga endukwini, ngesikhathi ifinyelela kowandulela owamanqamu kwiNdebe Yomhlaba ka-2019. AmaProtea aqale ngokunqoba iSpar Netball Challenge ngoMashi, edla iNamibia, ne-Uganda.
Abuyele enkundleni ngo-Okthoba ngohambo lwase-Europe, lapho enqobe yonke imidlalo emihlanu ayidlalile, ehlula iWales, Scotland, i-Ireland kabili neqembu laseNorthern Ireland, elibizwa ngamaWarriors. Asonge unyaka ngoNovemba, ngokuvikela isicoco se-Africa Netball Cu, eNamibia.
Umdlali wethenisi yabasebenzisa isihlalo esinamasondo (wheelchair tennis) uKgothatso Montjane, uqophe umlando ngokuba ngowokuqala wase-Afrika, ukuthi adlale emiqhudelwaneni emikhulu emine (Grand Slams) ngonyaka owodwa.
Kwi-Australian Open ufinyelele kowandulela owamanqamu lapho ehlulwe khona nguYui Kamiji waseJapan. Uphinde wakhishwa ngumdlali ofanayo kowandulela owamanqamu kwiFrench Open nakumakota e-US Open.
UMontjane wenza kahle kakhulu nakwiWimbledon, efinyelela kowamanqamu kwabadlala ngabodwa nabadlala ngababili.
Ama-Olympic aseTokyo abelindelwe ngamehlo abomvu ngemuva kokuthi egcine engadlalwa ngonyaka owedlule ngenxa yobhubhane lweCovid-19. Kwakunamathemba amakhulu ngethimba laseNingizimu Afrika, ngemuva kokuqoqa izindondo eziwu-10 kuma-Olympic aseRio ngo-2016, ezimbili zegolide, eziyisithupha zesiliva nezimbili zethusi.
Akuhambanga kahle ngoba elakuleli ligcine lizuze izindondo ezintathu kuphela eTokyo, kodwa okugqamile ukuthi zontathu zatholwa ngabesifazane.
I-surfing ifakwe okokuqala kuma-Olympic nonyaka lokho kusize iNingizimu Afrika, ngoba uBianca Buitendag uthole indondo yesiliva ngokwehlulwa kowamanqamu uCarissa Moore wase-USA.
Isihlabani sama-Olympics ango-2021 eNingizimu Afrika, ngumbhukudi uTatjana Schoenmaker, owahlomula ngezindondo ezimbili.
USchoenmaker wathola isiliva kwi-100m breastroke yabesifazane wabe esenza ezibukwayo kwi-200m breaststroke ethatha igolide, waqopha irekhodi elisha lomhlaba ngesikhathi esingu-2:19.16.